Quba qabduu laata? waanni mootummaa kol. Abiy fi Lammaan .. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQuba qabduu laata? waanni mootummaa kol. Abiy fi Lammaan ..
Quba qabduu laata? waanni mootummaa EPRDF ykn k Abiy fi Lammaan hogganamu Lixa Oromiyaa keessa jiru walii isaa gidduutti jeequmsa uumaa jiraachuusa uumaa jiraachuutu maddeen keessoo isaaniitii nuuf gabaasan sababiin waldhabdeef girrigii gidduu isaaniimmoo..
1. Nuti du, a seenaa hin qabnerratti dhumaa jirraa.
2. Hawwaasni/uummanni naannochaa akka waraana ormaatti ykn diinaatti nu ilaala qabees nudabarsa.
3. warri sanyiin amaara ta’aniimmoo waayee qubeen fidallii afaan amaaraa oromiyaa keessatti dhorkame sababeeffachuu magaalaa D Doolloo keessatti kaleessa 28/8 2019 Ajajoota waraanaa/matoo halaqaa oromoo ta’an 3 ajjeefamaniiru.
4. kanuma sababeeffachuu waanni mootummaa EPRDF ykn k Abiyf Lammaan hogganamu Lixa Oromiyaa keessa jiru walii isaa gidduutti jeequmsa uumaa jiraachuusa uumaa jiraachuutu maddeen keessoo isaaniitii nuuf gabaasan sababiin waldhabdeef girrigiirrii gidduu isaaniimmoo..
3. warri sanyiin amaara ta’aniimmoo waayee qubeen fidallii afaan amaaraa oromiyaa keessatti dhorkame sababeeffachuu magaalaa D Doolloo keessatti kaleessa 28/8 2019 Ajajoota waraanaa/matoo halaqaa dhalootaan oromoo ta’an warra sanyiin Amaara ta’aniin 3 ajjeefamaniiru.
4. kanuma sababeeffachuudhaani waayeen waltaa Qaruxee Ormiyaa( OCI) sunisimmoo waraanicha keessatti shororkaa daran hammeessaa deemaa jira. sunisimmoo waraanicha keessatti shororkaa daran hammeessaa deemaa jira.